Horjoogeyaal katirsanaa Al-shabaab oo Dowlada isku soo dhiibay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Horjoogeyaal katirsanaa Al-shabaab oo Dowlada isku soo dhiibay
Horjoogeyaal katirsanaa Al-shabaab oo Dowlada isku soo dhiibay
Horjoogeyaal sare oo ka tiran kooxda Argagixisada ah ee Al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidammada dowladda ee ku sugan magaalada Baardheere ee gobolka Gedo
Labadaan horjooge ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Aadan Cabdi Maxamed (Aadan Coobbe) iyo Food Aadan Maxamuud.
Raggaan ayaa waxay qeyb ka ahaayeen horjoogayaasha qarsoon ee tallada kooxda wax ka gooynayay , taas oo ka dhigan farriin kale oo muujineysa in ay sii burburayaan argagixisada Al-shabaab.
Labada nin ayaa waxay la socdeen gaari Suzuki ah oo ay kaga soo baxeen magaalada Bu’aale, iyagoo ku soo galay tuulada lagu magacaabo Tubaako oo Koonfur ka xigta magaalada Baardheere.
Aadan Coobe ayaa xilaal kala duwan kasoo qabtay kooxda Al-Shabaab,Iyadoo ay jagooyinkaas ka mid ahayeen xubin u ka ahaa Golaha Shuurada waxaa uu umatali jiray gobolka Jubbada Hoose,sidoo kale Aadan Coobe ayaa hore u soo noqday Madaxa Qeybta Saadka Al-shabaab u qaabilsanaa gobolka Jubbada Hoose.
Labadaan horjooge oo ku jira gacanta dowladda ayaa lagu hayaa goob nabdoon, saddexdii bilood ee la soo dhaafay Al-shabaab waxaa ka soo goostay ilaa tobaneeyo horjoogeyaal ah iyo boqllaal malleeshiyaad ah, oo u adkeysan waaye cadaadista dagaal ee ciidammada dowladda iyo duqeymaha diyaaraha Mareykanka ee lagu baacsanayo kooxahan argagixisada ah.
Previous articleWasiirka Cadaaladda XFS oo maanta furay tababar ku saabsan Hanaanka sharci Qorista
Next articleDuqa Muqdisho oo amray in lagu banneeyo muddo labo asbuuc ah Machadka Boostada iyo Isgaarsiinta